Varotra varotra - Yantai Ishikawa Sealing Technology Co., Ltd.
Taorian'ny ezaka nandritra ny taona maro, YTSC dia nanjary nahay nanao drafitra sy fitsapana nifanaraka tamin'ny OEM. Ireo vokatra dia raisina an-tsehatra amin'ny sehatra toy ny fiara ara-barotra, fiaran'ny mpandeha, sambo, milina ankapobeny, indostria petrochemical ary tobim-pamokarana hafanana.
Ny gazy fametahana tombo-kase, ny faritra misy ny fingotra ary ny ampinga hafanana dia atolotra amin'ny motera misy orinasa mihoatra ny 70 toy ny FAW, DFM, SAIC Motor, Weichai Power, Wuxi Power, SDEC, YC DIESEL, DEUTZ, Engine Diesel Dalianel）, Huachai Power, SINOTRUC, GAC Motor . Ny gasket famehezana V12 namboarina (S1003030-46K lasitra varingarina) dia napetraka ao amin'ny fiara famerenana ho an'ny filoha Hu Jintao amin'ny lanonana fankalazana ny faha-60 taonan'ny firenena.
Ny takelaka famehezana ny fibre dia raisina betsaka amin'ny indostria petrochemical sy sambo ary natokana ho an'ny QPEC, Daqing Petrochemical, Jilin Chemical Industry, GSI, CSSC, Bohai Ship-yard, sns. Ankehitriny ny vokatra dia aondrana any Japon, Korea, Australia, Azia atsimo atsinanana. sy Moyen Orient.
Ny takelaka fametahana lakaoly dia ampiasaina amin'ny lohataona Clamp, silencers, pad freins sns sns ary nahazo fankatoavana betsaka avy amin'ny tsena. Ny vokatra dia efa mandeha any amin'ny tsena ampitan-dranomasina ary efa nahazo ny fankatoavan'ny mpanjifa ny sasany tamin'izy ireo.